Z - Maha GanDarYone Ashin Janakabivimsa - Zanakar BiWunTha - မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ - Most Recent
Views: 872]" style="width:120px;height:90px;" />	Z - Maha GanDarYone Ashin Janakabivimsa - Zanakar BiWunTha - မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အခြေပြု...
အခြေပြု ပဌာန်းတရားတော် (1/17) အမရပူရမြို့ ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ Sayadaw Ashin Janakabhivamsa: "1/17" Tayardaw ()
Tags: Views: 410]" style="width:120px;height:90px;" />	Z - Maha GanDarYone Ashin Janakabivimsa - Zanakar BiWunTha - မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အနတ္တလက္ခဏသ...
အနတ္တလက္ခဏသုတ် (3) တရားတော်
အမရပူရမြို့ ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ
Sayadaw Ashin Janakabhivamsa: "Anatta Lakkhana Sutta 3"...
Tags: Views: 383]" style="width:120px;height:90px;" />	Z - Maha GanDarYone Ashin Janakabivimsa - Zanakar BiWunTha - မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အခြေပြု...
အခြေပြု ပဌာန်းတရားတော် (4/17) အမရပူရမြို့ ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ Sayadaw Ashin Janakabhivamsa: "4/17" Tayardaw (
Tags: Views: 295]" style="width:120px;height:90px;" />	Z - Maha GanDarYone Ashin Janakabivimsa - Zanakar BiWunTha - မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အခြေပြု...
အခြေပြု ပဌာန်းတရားတော် (10/17) အမရပူရမြို့ ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ Sayadaw Ashin Janakabhivamsa: "10/17" Tayardaw ()
Tags: Z - Maha GanDarYone Ashin Janakabivimsa - Zanakar BiWunTha - မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဓမ္မစင်္ကြာ...
ဓမ္မစင်္ကြာ ပါဠိတော် တရားတော်
Sayadaw Ashin Janakabhivamsa: ( Dhamma Videos)
Tags: Views: 333]" style="width:120px;height:90px;" />	Z - Maha GanDarYone Ashin Janakabivimsa - Zanakar BiWunTha - မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အခြေပြု...
အခြေပြု ပဌာန်းတရားတော် (16/17) အမရပူရမြို့ ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ Sayadaw Ashin Janakabhivamsa: "16/17" Tayardaw ()
Tags: Views: 305]" style="width:120px;height:90px;" />	Z - Maha GanDarYone Ashin Janakabivimsa - Zanakar BiWunTha - မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အခြေပြု...
အခြေပြု ပဌာန်းတရားတော် (7/17) အမရပူရမြို့ ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ Sayadaw Ashin Janakabhivamsa: "5/17" Tayardaw ()
Tags: Views: 393]" style="width:120px;height:90px;" />	Z - Maha GanDarYone Ashin Janakabivimsa - Zanakar BiWunTha - မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အနတ္တလက္ခဏသ...
အနတ္တလက္ခဏသုတ် (၁) တရားတော်
အနတ္တလက္ခဏသုတ် (5) တရားတော်
အမရပူရမြို့ ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော်...
Tags: Z - Maha GanDarYone Ashin Janakabivimsa - Zanakar BiWunTha - မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဓမ္မစင်္ကြာတ...
ဓမ္မစင်္ကြာတရားတော် (4) အမရပူရမြို့ ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော်
အရှင်ဇနကာဘိဝံသ Maha Gandhayon Sayadaw Ashin Janakabhivamsa ()
Tags: Z - Maha GanDarYone Ashin Janakabivimsa - Zanakar BiWunTha - မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အတိတ်မှ...
အတိတ်မှ ပုံရိပ်တစိတ်တဒေသများ Biography
အမရပူရမြို့ ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ Sayadaw Ashin...
Tags: biography Pages: 12of 2